_Ukukhululwa_, nguJohn Hart. Kufuneka ufundelwe abathandi bobugebenga. | Uncwadi lwangoku
Iintsuku ezine. Yile nto indithathileyo ukuyifunda Ukuhlawulelwa, ngumbhali waseMelika UJohn hart. Kungenxa yokuba le ncwadi ihlala ihleli ixesha elide kwizandla ezi-agile kunye namehlo ukuba ilungile. Inkqubo ye- uphononongo onegunya ngakumbi nobungcali bendisele ndiyibekile Emafini. Ndingumfundi omnye kwaye ndibhala kule bhlog yoncwadi nayo inezixhobo zayo. Kulungile Ndiyayiphakamisela kwiindawo eziphakamileyo.
Ngu iyelenqe (phakathi kwentolongo nomnyama) kunye nokujija kwalo, isingqisho kunye nezixhobo, abalinganiswa kunye neprozi yayo ebukekayo emiliselwe kwimibongo. Inye inoveli yekwayara enika ukuqaqamba kubo bonke abalinganiswa. Ukuziqhuba, zivelile kodwa zihlala zinamandla. Ukungcatsha, iintlungu, uthando kunye nentiyo, uloyiko, impambano kunye nethemba, ubungqongqo, ukuziphindezela, iimfihlelo kunye namandla omoya. Ewe kunjalo. Kucetyiswa kakhulu kubathandi be inoveli emnyama okanye ngokulula iinoveli ezintle.
3.1 UElizabeth omnyama
3.2 Udonga lukaAdrian
3.3 UCharlie becket
4 Kutheni kufuneka uyifunde
UJohn hart (UDurham, North Carolina, 1965) wayeqhele ukuba njalo igqwetha kude kube lusuku olunye waxhoma i-toga yakhe kwaye wazinikela kuncwadi. Ipapashiwe cinco novelas ezifumene olona vavanyo lubalaseleyo. Utshatile kunye neentombi ezimbini, uhlala eMantla Carolina, ilizwe apho amabali akhe enzeka khona.
IHart iphumelele amabhaso amabini kaEdgar Allan Poe yenoveli ebalaseleyo. Nguye kuphela ophumeleleyo ngokulandelelana. Bayithelekisile UScott Turow, uJohn Grisham okanye uRaymond Chandler. Ezinye iincwadi zezi Ukumkani wobuxoki (2008) Indlu yentsimbi (2012) kunye Akukho magwababa (2014).
Ukuqala sine elivisayo liphethe umpu ulinde umntu obulele umama wakhe xa wayeselusana. Le ndoda lipolisa elinyanisekileyo, elithe lakugwetywa ngokungafanelekanga nasemva kweminyaka elishumi elinesithathu lisentolongweni, lakhululwa.
Njenge-axis esembindini, umcuphi. Ukhathazekile kwaye ukhathazekile Ngenxa yobunzima bexesha elidlulileyo, kuya kufuneka ajongane naye emva kokudutyulwa ngokukhohlakeleyo apho athe wachaphazeleka kwelinye ixhoba lolutsha.
Ukudibanisa yonke into kubonakala ngathi umzimba phantsi kweshiti esibingelelweni secawe elahliweyo. Umzimba oya kuba ngaphezulu.
Kunzima ukuhlala nenye kuba wonke umntu uyakhanya ngexesha lakhe. Zineemfihlo zazo kunye nooks kunye crannies. Ukusuka kwezona ziphambili ukuya kwezizisekondari, ezifanelekileyo. Kwaye ke abantu abakhohlakeleyo.
Mhlawumbi kunjalo oyena mntu uphambili. Andihlali nditsaleleka kubalinganiswa ababhinqileyo abaphambili (ngamnye kuthi uneempazamo), kodwa uMnyama ukwazile ukundiphumelela. Ukomelela kwakhe kunye nendlela yakhe yokujongana neziporho zakhe. Ngokuzimisela kwakhe ukukhusela abo bamngqongileyo nangayiphi na indleko. Ngumlinganiswa abadityaniswa bonke abanye. Unomdla ngo-Adrian Wall, uya kuhlala ekulungele ukukholelwa kuye.
Expolice, ngu Iqhawe elithandwayo kwaye liyithiyile i-antihero xa ewa elubabalweni. Isigwebo sakhe siya kuba sisihogo sangempela sokuhlushwa kunye nokuthotywa ngumlindi okhohlakeleyo nonoburhalarhume ongaphaya kwengqondo kunye namadoda akhe. Kodwa iWall iyakwazi ukusinda kwaye iphume, nangona engazukumsusa. Xa ulwaphulo-mthetho olufana nolo lumfake entolongweni lwenzeka, uya kuphinda abonakale. Kwaye akanalo ncedo phantse nabani na.
Nguye Iqabane lika-Elizabeth Black. Umhlobo kunye nomhlobo, uhlala ezazi iingxaki angena kuzo uMnyama. Ngaba loo mntu ubunewunewu besibini, obukhanya ngokokukhanya okukhulu.
Kukwakho la maxhoba aselula kuzo zonke iimeko zangaphambili nezangoku. Unxweme lweChanning kunye noGideon Strange bahamba ngenceba yezi ziganeko kwaye bajonge kuphela abo bazifuna ngokwenene. Kwaye a igqwetha elidala ezokunceda uMnyama noDonga. Ungomnye wabalinganiswa abenza uncume ngesiqabu ngamaxesha anzima aqhubeka kuwo ama-protagonists.
Kwaye ngemvelaphi eyoyikekayo yentolongo echitha iyelenqe umlindi onentiyo kunye nabalingane bakhe zezona zikhohlakeleyo yomsebenzi. Okanye mhlawumbi akunjalo.
Kutheni kufuneka uyifunde
Kungenxa yokuba ukuba. Utyhila amaphepha ungakhange uqaphele. I abalinganiswa kunye nemiphefumlo yabo bathabathela umbulelo kwiprozi yeHart, phantse imibongo emsulwa kwezinye iindawo. Kwaye kuba ichaza ngobuchule eyona imbi kakhulu neyona intle yintoni enokukhutshwa yamava abuhlungu kakhulu kunye nomda. Ezikurhuqa emhlanyeni kwaye ezibonisa konke ukukhanya. Y ukugcina uxinzelelo lonke ixesha.
Ndiya elandelayo kwiHart.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » _Ukukhululwa_, nguJohn Hart. Kufuneka ufundelwe abathandi bobugebenga.
Khange ndikwazi ukugqitha amaphepha okuqala, okona kugwenxa kwabo kunye nokukhohlisa, ngaphandle komdla omkhulu okanye uvakalelo kunentombazana leyo, kundenze ndarhoxa.
Ngokuchasene noko, iNtaba iBull yandenza ndanomdla ukusuka kwiphepha lokuqala ukuya kwiphepha lokugqibela: ukubhala okuhle, iatmosfera, ukonwaba rhoqo kunye nomdla, iingxoxo ezinkulu.
inyani andinawo umonde kwaphela kwaye ukuba amaphepha aliqela ayandidina okanye umxholo uyandonyanyisa, ndiza kuwushiya, nangona kamva isicatshulwa singcono; oko kundikhokelela ekufundeni imisebenzi ebalaseleyo